Maaskaro la tuuro, FFP2 / FFP3 KN95 Maaskaro, Guud ahaan Difaaca - Ah-Xarunta
Ka ilaali Maska
Maaskaro FFP2 / FFP3 KN95
Isku-laabashada Maaskaro Maaskaro ah
Koobka Wejiga Maaskaro
Heerkulbeegga Wejiga Hore
AH-XARUNTA CO., LTD waxay raacdaa alaab cillad la'aan ah; u hoggaansamaan wax soo saarka iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed si ay ula wareegaan suuqa caalamiga ah ee ugu sarreeya, oo inta badan laga iibiyo Japan, Yurub iyo Mareykanka, Koonfur-bari Aasiya iyo waddamo iyo gobollo kale. Dhanka kale, amarradaada OEM ODM waa la soo dhaweynayaa. Waxaan ku dadaalaynaa baaritaanka, soo saarista, suuq geynta iyo u adeegida alaabada aan gogosha lahayn.
Waji daboolan oo waji ah
Maaskaro caafimaad oo ay u isticmaalaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaad qolka qalliinka ama goobaha kale ee caafimaadka si loo yareeyo halista faafitaanka cudurrada, gaar ahaan xaaladaha faafa ama xaaladaha faafa. Waxay sidoo kale ka ilaalisaa qofka xiran inuu ku buufiyo dareerayaasha laga yaabo inay ku sumoobaan kiis gaar ah.
Heerkulbeegga aan la xiriirin Cabirka hal-badhan, hawlgallo fudud oo loogu talagalay carruurta iyo da 'adoo adeegsanaya dareemayaal heer sare ah oo infrared ah, si toos ah u soo uruuriya noocyo badan oo ah xogta heerkulka jidhka iyo cabbiraadda caqliga leh, cabbirka oo ka saxsan waxqabadkana uu yahay mid deggan oo la isku halleyn karo
Waxtarka sifeynta wejiga maaskarada ee loo yaqaan 'KN95 / FFP2' (heerka boodhka ka saaraya) waa in ka badan 95% walxaha aan saliida lahayn, walxaha shaandhayntu waxyeello uma laha jirka aadanaha.
* Wareegyada dhegaha ee laastikada ah waa kuwo raaxo leh oo aan dhaganayn.
* Qaybta sanka ee la hagaajin karo waxay ka caawisaa maaskaro inuu daboolo wejiga qofka isticmaala.
* Xiinka adag ee alxanka ah ee alxanka leh oo riixaya wareeg dhegta adag iyo qaab qurux badan.
* Goonnada difaaca ee la tuuri karo ee SMS-ka waxaa laga sameeyaa waxyaabo isku dhafan oo tayo sare leh. Waxay leedahay shaqada ka-hortagga fayraska, neefsashada, ka-hortagga osmosis, ka-hortagga biyaha, waana mid aan xasilooneyn.
* Suudhka difaaca ee la tuuri karo ee SMS-ka ayaa si raaxo leh loogu xiran karaa labadiisa tijaabinta biyaha iyo astaamaha maaddada lagu neefsan karo.
* Qalabka caagga ah ee SMS-ka ee kuleylka leh ayaa ka dhigaya heerka ugu sarreeya ee ilaalinta.
* 2 Sano Muddo-dheer oo fududaan kara in laga tago, ayaa ka dhigaysa jawi saaxiibtinimo.
AH-CENTER CO., LTD waxaa la aasaasay sanadkii 2020 waxaana lagu aasaasay magaalada Hefei ee gobolka Anhui, iyadoo cilmi baaris iyo wax soo saar horumarineed iyo iibin loo sameeyay mid ka mid ah shirkadaha casriga ah. Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay si dhakhso leh u horumarinaysaa, warshadda oo daboolaysa guud ahaan aagga wax-soo-saarka qiyaastii 248,000 mitir murabac .Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka kooban yihiin maaskaro wajiga maaskaro, maaskaro caafimaad, maaskaro wajiga Kn95, maaskaro FFP2, maaskaro FFP3, koobka maaskaro wejiga la tuuri karo, heerkulbeegga infrared, goonooyinka go'doomin, Waxaan leenahay tas-hiilaad wax soo saar oo horumarsan iyo qalab, shaqaale xirfadlayaal ah iyo iib khibrad leh.
Sii ciyaar buuxda awooda shaqsiyeed ee shaqaale kasta
Kireyso oo kobci dadka saxda ah
Kordhi oo ku dhiirrigeli horumarinta xirfadaha shaqsiyeed shaqsiyeed
Bixi jawaab celin wax ku ool ah oo socota
Ku dhiirrigeli shaqaalaha inay wax cusub ikhtiraacaan oo beddelaan
Abuur jawi shaqo oo wanaagsan
Ku dhiiri geli wada shaqeynta kooxda
Aqoonso oo abaal mari waxqabadka muuqda
Bixi xirmo magdhow iyo faa'iidooyin
Kordhi isgaarsiinta labada dhinac ee isdaba jooga ah
Macaamilku ha dareemo qanacsanaan
Faham aragtida iyo istaraatiijiyada macaamilka
Si joogto ah u hagaajineyno alaabtayada, adeegyadeena iyo qiimaheena
Sii odoroso oo daboolo baahiyaha macaamiisha
Samee isbahaysi macaamiil wax ku ool ah iyo alaab-qeybiyeyaal
Si loo horumariyo ganacsigeena
Hagaajinta faa'iidada muddada-dheer
Ballaadhi baaxadda meheraddeenna iyo macaamiisheenna
Si joogto ah u maal gashso badeecooyin, adeegyo iyo taageero cusub
Ficilka u hogaansanaanta dhaqanka anshaxa
Inaad ku shaqeyso daacadnimo iyo hufnaan
Mahadnaq is aaminaad iyo is ixtiraam
Ku dhiiri geli kala duwanaanta iyo qadarinta dhaqanka ee shaqaalaha
Baahida loo qabo in la ilaaliyo lana daryeelo bulshada iyo hareeraheeda
Talooyin ku saabsan iibsashada maaskaro PM2.5
Sidee loo doortaa wajiyadda PM2.5? Magaalooyinka maanta waxaa ka buuxa qiiq, tayada hawada ayaa walwal leh. Waxaan ka wada hadalnay in waji-furka loo tixraaco maaskarada difaaca ee sida gaarka ah loogu talagalay PM2.5, halka maaskarada caadiga ah ee bulshada loo adeegsado in laga ilaaliyo qabowga. Qalabkooda iyo qeexitaankooduba ma laha codsi midaysan ...
Maaskaro xiinku si sax ah ma u xidhan yahay?
Maaskarada loo yaqaan 'Anti haze mask' waa baahi maalinle ah oo nolol maalmeedkiisa looga baahan yahay, taas oo ka hortagi karta boodhka, qiiqa, xasaasiyadda manka iyo shaqooyinka kale, isla markaana ka ilaalinaysa in siigadu ay gasho sambabaha jidhka iyada oo loo sii marayo daloolka afka iyo sanka oo ay waxyeello u geysato jirka. Hadda aan aragno sida saxda ah ee loo xirto maaskaro qulqulaya i ...
Ka taxaddaridda carruurta xiran maaskaro PM2.5
Maaskarada PM2.5 ee carruurta ayaa sidoo kale yeelan doonta saameyn gaar ah. Wax soo saarka wanaagsan ayaa ka hortagi kara inta badan wasakheynta hawada. Saameyntooda wax ku oolka ah waxaa saameyn ku yeelan doona arrimo kale oo badan oo la xiriira, sida nooca wasakheynta hawada, sida haddii cabirka maaskaro uu ku habboon yahay, sida loo xirto ...
Telefoon ： +8613965027483
Emayl ： linda@medical-best.com
Cinwaanka ： Xirmooyinka B, Jiaqiao Plaza, Hefei Anhui, Shiinaha.